Koox hubaysan oo Al-Shabaab ah oo Muqdisho ku dishay sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada sirdoonka dowlada federaalka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKoox hubaysan oo Al-Shabaab ah oo Muqdisho ku dishay sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada sirdoonka dowlada federaalka Soomaaliya
October 25, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Nin hubaysan oo katirsan Al-Shabaab. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Koox hubaysnaa oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa toogasho ku dishay sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada sirdoonka dowlada federaalka Soomaaliya, sida ay sheegeen booliiska.
Kornayl Cabdicasiis Caraye ayaa kooxda hubaysan dishay isaga oo u socday masaajid kuyaala degmada Waaberi shalay oo Isniin ahayd, sida ay sheegeen ciidamada booliiska ee dowlada federaalka Soomaaliya.
Ciidamada booliiska ayaa sheegay in ay goobta gaareen balse kooxdii dilka geysatay ay baxsadeen mar hore.
Afhayeenka howlgalada milatariga ee Al-Shabaab, Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegay in ay iyagu dileen Kornayl Caraye.
October 1, 2017 Galmudug oo iclaamisay xaalad deg-deg ah iyadoo ay jirto khilaaf siyaasadeed